WARARKA BARAAWEPOST Talaado 10 January 2012
Ururka Midowga Afrika oo sheegay in kor loo qaadayo tababarada la siinayo ciidanka booliska soomaaliyeed
Ururka midowga Afrika ayaa waxa uu ku baaqay in la sii xoojiyo lana kordhiyo tababarada ay bixinayaan ciidamada booliska AMISOM, ee loo fidinayo ciidamada booliska Soomaaliyeed, si loogu guuleysto dib u soo celinta iyo adkeynta amniga magaalada Muqdisho.
Ku-xigeenka ergaega gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Amb Wafula Wamunyinyi ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la joogteeyo kulamada ay Muqdisho ku yeelanayaan saraakiisha Booliska ee ciidammada AMISOM iyo kuwa booliska ee DFKMG Soomaaliya, islamarkaana ay ciidamada AMISOM sii wadaan tababarada la siinayo ciidamada booliska Soomaaliyeed taasoo haddii loo fuliyo sida qorsheysan qayb weyn ka qaadan karto dib u soo celinta amniga dalka.
Mr Wafula Wamunyinyi waxa uu xusay in kulamada amniga looga hadlayo ay suurtagelinayaan xoojinta amniga ka jirta Magaalada Muqdisho, wuxuuna caddeeyay in kulamada soo socda ay noqon doonnaan kuwa looga hadlo gobollada kale ee gacanta dowladda ku jirta.
Madaxa ciidamada booliska ee AMISOM Dr. Charles Makono ayaa asna dhankiisa ka sheegay in ciidamada AMISOM ay sii wadayaan sanadkan cusub tababarista ciidamada booliska Soomaaliyeed, isagoo intaa ku daray in talaabadaasi ay qayb ka tahay qorshaha AMISOM ee ku aaddan nabad ku soo celinta Soomaaliya.
Hadaladan ayaa ka dambeysay kaddib markii maalmihii ugu dambeeyey ay Muqdisho kulamo ku yeesheen saraakiisha Booliska AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo uu horkacayay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Sarreeyo Guuto Shariif Sheekhuna Maye kuwaasoo uu talyuhu ku codsaday in sanadkan la kordhiyo tababarada loo fidinayo ciidamada booliska Soomaaliyeed.